Ogaanshaha sida Australiyaanku isu salaamaan | Safarka Absolut
Haddii fasaxaaga soo socda aad rabto inaad safar ugu baxdo Australia ama aad jeclaan lahayd inaad u tagto inaad wax ku barato waddankan, mid ka mid ah dhinacyada ay tahay inaad ogaato inaad si dhakhso leh ula qabsato nolosha waxaa jira caadooyinkeeda iyo caadooyinkeeda maalinlaha ah.
Dadka qaarkii ee ku nool wadan cusub waxay u horseedi karaan shoog dhaqameed, gaar ahaan markay la qabsadeen deegaanadooda cusub. Si aad ugu noolaato bulsho sida Australiyaanka ah waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad sameyn kartid, kuwaas oo kaa caawin doona inaad la qabsato sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah oo aad u dareento kalluun biyo ku jira.
Marka ugu horreysa ee lala xiriiro dadka waddanka u dhashay, si aad u weydiisato tilmaamo ama nooc macluumaad ah, waa inaad salaantaa oo si habboon isu barataa. Sababtaas awgeed, qodobkaan waxaan ku baran doonnaa sida Australiyaanku isu salaamaan.
1 Maxay Australiyaanku jecel yihiin?
2 Waa sidee salaanta Australia?
3 Qaacido noocee ah ayaa loo adeegsadaa in lagu salaamo Australia?
4 Waa sidee bandhigyada?
5 Sidee Australiyaanku isugu salaamaan xaflad?
6 Siyaabo kale oo loogu salaamo waddamada Barwaaqo Sooranka
Maxay Australiyaanku jecel yihiin?
Sidoo kale loo yaqaan "Aussies" Australiyaanku guud ahaan waa dad naxariis leh, daacad ah, kaftan badan oo aan rasmi ahayn markay la macaamilayaan. Waxay ku raaxaystaan ​​heer waxbarasho oo wanaagsan, taas oo u tarjumeysa fursado shaqo oo ballaaran iyo nolol tayo sare leh. Tan dambe waxay ka muuqataa saaxiibtinimadooda, furfurnaan iyo dabacsanaan.
Australiyaanku waa dad fudud oo si weyn u qiimeeya dadaalka iyo shaqada adag, iyaga oo aan kala soocin fasalada bulshada. Waxaa lagu gartaa maskax furan, ixtiraam dhaqamada kale iyo martigelinta shisheeyaha. Marka la soo koobo, Australiyaanku waa dad diiran, dhow oo saaxiibtinimo leh.
Waa sidee salaanta Australia?
Markaad ka hadlayso sida salaantu tahay Australia, waa inaan tixgalino macnaha guud ee kulankaas bilowga ah ee wadahadalku dhaco. Si kale haddii loo dhigo, qoys aan rasmi ahayn ama saaxiibbadii oo isu yimaada ayaan la mid ahayn kulan shaqo oo rasmi ah.
Tusaale ahaan, Australiyaan ka mid ah asxaabta waxay isku salaamaan qaab kalgacal leh: dhunkasho dhabanka ama habsiin gaaban. Hadda, hadday tahay kulan ganacsi ama jaamacad, Australiyaanku si xushmad leh ayey isugu salaamaan si rasmi ah isgacan qaadasho iyo dhoolla-caddayn kooban.
Sida caadada u ah Australiya iyo sida dalal kale oo badanba, salaan waa in loo sameeyaa bilowga iyo dhammaadka kulanka, iyo sidoo kale martida kasta ee imanaysa inta kulanku socdo.
Intaas waxaa sii dheer, Australiyaanka badiyaa waxay la hadlaan dadka kale iyagoo adeegsanaya magacyadooda xitaa kulanka ugu horeeya sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad xafiddo magacyada dadka kuwada hadlaya marka laguu soo bandhigo. Sidoo kale waa lagama maarmaan in indhaha la iska qaado marka aad salaamayso qofka kale. Tani waxay calaamad u tahay ixtiraamka waxayna sidoo kale muujineysaa inaad fiiro gaar ah u leedahay oo aad dhageysaneyso waxa qofka kale dhahayo.
Qaacido noocee ah ayaa loo adeegsadaa in lagu salaamo Australia?
G'day: Qaabka loo soo gaabiyo "Maalin Wanaagsan" waa qaaciddada ugu caamsan ee aan rasmiga ahayn ee laysku salaamo waxaana loogu dhawaaqaa "gidday." Waxaa loo isticmaali karaa maalin iyo habeen labadaba.
"Ow ya goin 'mate?": Waa qaaciidada la soo gaabiyey ee caan ka ah "Sidee ku socotaa jaalle?" oo macnaheedu yahay sidee tahay.
"Cheerio": Waxaa loo isticmaali jiray in lagu sagootiyo.
"Cya This Arvo": Sidaad arki doontid, Australiyaanku waxay jecel yihiin inay soo gaaraan ereyada. Qaaciddadaan macnaheedu waa "aan is aragno galabta." Waxay u adeegsadaan muujinta arvo inay ula jeedaan galab xaaladaha oo dhan.
"Hooroo": Waxay macnaheedu tahay inaan mar dambe is aragno.
"Toodle-oo": Qaab kale oo loo macasalaameeyo.
“Subax wanaagsan Subax wanaagsan.
"Galab wanaagsan": Galab wanaagsan
"Fiid wanaagsan": Fiid wanaagsan
“Habeen wanaagsan Habeen wanaagsan
"Wanaagsanaa inaan kula kulmo": Waan fiicanahay inaan kula kulmo.
"Way fiicantahay inaan ku arko": Waan ku faraxsanahay inaan ku arko.
Waa sidee bandhigyada?
Marka ay timaado in lagu soo bandhigo labadaba rag iyo dumar qaab rasmi ah, tibaaxaha "Señor", "Señora" iyo "Señorita" waxaa loo isticmaalay inay yihiin "Mr.", "Mrs." iyo "Miss" oraahda ay ku qoreen Ingiriisiga.
Hadday tahay bandhig aan rasmi ahayn oo ka dhex socda koox asxaab ah, oraahyo ay ka mid yihiin "Kani waa saaxiibkay Peter" (waa saaxiibkay Peter) ama "Tani waa shaqaalahayga Ann" (iyadu waa Ana, ila shaqeeye) waa la isticmaali karaa .
Sidee Australiyaanku isugu salaamaan xaflad?
Waad isticmaali kartaa mid ka mid ah qaaciidooyinka aan ku tilmaamay tuducyadii hore. Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu hayaa in haddii lagugu casuumo xaflad ama hilib dubid ay caado kuu tahay inaad soo qaadato wax aad cabto (tusaale ahaan biirka, khamriga ama cabitaannada fudud) si aad ugu raaxaysato kooxda iyo taada.
Sidoo kale, Australiya waxaa loo arkaa inay edeb leedahay inaad la xiriirto martida xafladda si aad u ogaato haddii ay u baahan yihiin ama ay rabaan inaad wax kale keento. Dhinaca kale, haddii lagugu marti qaado casho qof gurigiisa jooga, waa caado inaad hadiyad u keento martida markii aad timaaddo, sida ubaxyo ubax ah, sanduuq jukulaatooyin ah ama dhalo khamri ah.
Siyaabo kale oo loogu salaamo waddamada Barwaaqo Sooranka
Barwaaqo sooranka waa urur iskaa wax u qabso ah oo ka badan konton waddan oo leh xiriir dhaqan, mid taariikheed iyo mid dhaqameed, in badan oo ka mid ahna ay yihiin Ingiriisiga luqadda rasmiga ah.
In kasta oo waddan kastaa leeyahay nidaamkiisa siyaasadeed oo madaxbannaan, qaar ka mid ah sida Australia ama Kanada ayaa sii wadaya inay xiriir la yeeshaan boqortooyada Ingiriiska. Marka sidee ugu salaantaa wadamada xubnaha ka ah Barwaaqo Sooranka sida Kanada ama England?
Kanadiyaanku waa mid ka mid ah dadka ugu saaxiibtinimada badan adduunka, taas oo u tarjumeysa salaannada ay ula macaamilaan dadka kale.
Tusaale ahaan, Quebec salaanta inta badan la isticmaalo waa "Bonjour" iyo "Ça va?" inta lagu jiro Maritimes dadku waxay isku salaamaan "Hello" ama "Hi" fudud oo ay ku xigto saaxiib "Sidee ya 'doin'?" Dhinaca kale, Ontario iyo Toronto sidoo kale waxay adeegsadaan qaaciidooyin isku mid ah.
Waxaa la sheegaa in Alberta iyo Saskatchewan ay yihiin halka ay ku nool yihiin dadka ugu saaxiibka badan wadanka waxaadna markasta ka heli doontaa dad raba inay sheekaystaan ​​si ka duwan magaalooyinka waaweyn oo dadku inta badan ku degdegaan.
Sida ugu badan ee Ingiriisku isku salaamo waa isgacan qaadka Waana wax iska caadi ah in la dhaqan galiyo marka qof la barto qof kale ama ka hor inta aan la bilaabin kulan ka socda dunida ganacsiga.
Badanaa waxaad kaliya ku salaamaysaa dhunkasho mid ka mid ah dhabannada marka dadka wada hadlayaa ay saaxiibbo yihiin ama isbaranayaan oo jacayl ka dhexeeyo. Si ka duwan wadamada sida Spain, ma aha waxa ugu badan ee had iyo jeer lagu salaamo dhunkasho.
Siyaabaha kale ee loo salaamo waa:
"Hello ama Hi": Macnaheedu waa "hello".
"Sidee tahay?": Waxay ka dhigan tahay sida aad tahay waxaana badanaa lagu yiraahdaa qaabab rasmi ah oo ay weheliso isgacan qaadid.
"Sidee tahay":: Waxay kaloo macnaheedu tahay "sidee tahay" laakiin waxaa loo isticmaalaa xaaladaha aan rasmiga ahayn. Badanaa waxaa looga jawaabaa "wan fiicanahay mahadsanid, adiguna?" oo macnaheedu yahay "Waan fiicanahay, mahadsanid, adiguna?"
"Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo": Weedhan macnaheedu waa "waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo" waxaana badanaa lagu hadlaa iyadoo gacmaha la salaamayo. Badiyaa waxaa looga jawaabaa "wan kula kulmaa sidoo kale" (waan ku faraxsanahay sidoo kale inaan kula kulmo) waxaana badanaa la yiraahdaa iyadoo gacmaha la salaamayo.
"Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo": Waa qaacido kale oo lagu muujiyo in qof uu ku faraxsan yahay la kulanka qof kale. Si looga jawaabo, "too" waxaa lagu daraa dhamaadka xukunka sida kiiskii hore.
U adeegso tilmaamahan yar kulamadaada mustaqbalka ee badweynta waxaadna u salaami doontaa sida Aussie dhab ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Ogaanshaha sida Australiyaanku isu salaamaan
carepenis kuwa kasta oo kale oo soo salaamayaan sida gay iyo nuugi nin baa ciyey iyo dumarka Dhuusada iyo gay qosli Korka ay dameer iyo metal iyo farta ay dameer for 3000 saacadood siigaysanayso iyo dhammaadka shitdddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ku jawaab steven